October 2018 - Business Centric Network (BCN)
Business, Digital Accountant, Director Guide
October 26, 2018 October 25, 2018 San Thida
[Zawgyi] သင့်အတွက် စာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာများကို ကူညီပေးဖို့ ☁️💹 💻Digital Accountant ကကူညီပေးပါရစေ။ လူကြီးမင်းရဲ့ 📚📚📚လစဉ်စာရင်းများကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက် ☁️💹 💻 Digital Accountant ရှိပါတယ်။ လစဉ်ကြေး 💰💰💰၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်မှစတင်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ။ 🌐⛵️✈️ဘယ်နေရာရောက်ရောက်၊⏱⏱⏱ဘယ်အချိန်မဆို လူကြီးမင်း 💹💹💹လုပ်ငန်းရဲ့ စာရင်းများကို အလွယ်တကူကြည့်ရှု့နိုင်ပါပြီ။ #Digital #Accountant #MSME #Books #BCN #09977160671 https://businesscentricnetwork.com/2018/10/25/digital-accountant/ [Unicode] သငျ့အတှကျ စာရငျးပိုငျးဆိုငျရာမြားကို ကူညီပေးဖို့ ☁️💹 💻Digital Accountant ကကူညီပေးပါရစေ။ လူကွီးမငျးရဲ့ 📚📚📚လစဥျစာရငျးမြားကို စနဈတကြ ဆောငျရှကျပေးဖို့အတှကျ ☁️💹 💻 Digital Accountant ရှိပါတယျ။ လစဥျကွေး 💰💰💰၁၅၀,၀၀၀ ကပျြမှစတငျပွီး ဝနျဆောငျမှုပေးနပေါပွီ။ 🌐⛵️✈️ဘယျနရောရောကျရောကျ၊⏱⏱⏱ဘယျအခြိနျမဆို… Continue reading Digital Accountant
Business, Digital Accountant, SME
October 25, 2018 October 25, 2018 San Thida
#MSME #Books #BCN
October 24, 2018 San Thida
Leadership can be described as the ability to persuade others willingly to behave differently. It is the process of influencing people – getting them to do their best to achieveadesired result. It involves developing and communicatingavision for the future, motivating people and securing their engagement.
October 23, 2018 October 22, 2018 San Thida
🔔🔔🔔🌈🌈🌈 🧾စာရင်းအင်းပိုင်းဆိုင်ရာ(Accounting) ဆိုတာ တကယ်တမ်းကတော့ 🏢စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (Business) ရဲ့ဘာသာစကား တစ်ခုပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လုပ်ငန်းရဲ့ 💰💸ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်မှု အခြေအနေကို လုပ်ငန်းနဲ့ ပါတ်သတ်နေတဲ့ သူအားလုံး(Stakeholders) နဲ့ လုပ်ငန်းအကြားမှာ ဆက်သွယ်ရေးမှာ မရှိမဖြစ် 📰အရေးပါတဲ့ အရာ တစ်ခုမို့ပါပဲ။ Accounting ၏ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ 👨‍👩‍👧‍👧stakeholders များအနေဖြင့် 📊ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ကို အသုံးပြုကာ 👌ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ပြီး 📈တိုးတက်အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်လာအောင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာမှာ ✔️အထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ 📅တိကျမှုမရှိဘဲ၊ အချိန်နှင့် တပြေးညီ မဟုတ်တဲ့ 📊ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိုအခြေခံပြီးတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု လုပ်ကိုင်ဖို့ သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှပ်နှံလုပ်ဖို့ ⛔မဆုံးဖြတ်သင့်ပါဘူး။ 📑အထူးအရေးကြီးတာကတော့ 📊ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ဆိုတာ 👨‍👩‍👧‍👧Stakeholders များနဲ့ 🏢Business အတွက် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ🔬… Continue reading The Role of Accounting
💻🌩️Digital Accountant ဆိုတာ Business Centric Network ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ❔ဘယ်သူတွေအတွက်လဲ။။❔ 👨‍💼လက်ရှိ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေပြီး 💹စာရင်းဇယားတွေကို 📚✍️စနစ်တကျမှတ်သားချင်သူတွေအတွက်ပါ။ ကိုယ်တိုင် စာရင်းဇယားတွေ သွင်းချင်ပေမဲ့ တကယ်တမ်းသွင်းတဲ့ အခါမှာ 👎အခက်အခဲ ကြုံနေတဲ့သူတွေအတွက်၊ စာရင်းဇယားတွေကို သိချင်တဲ့ ⏲️အချိန်မှာ ကြည့်ဖို့အတွက် လိုအပ်သူတွေအတွက်ပါ။ 👩‍💼Digital Accountant ကဘာလုပ်ပေးမှာလဲ။ Accounting Solutions for Micro, Small and Medium Enterprises @ MSME Books (Cloud Based Accounting Software) ကို အသုံးပြုကာ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ 🏢လုပ်ငန်းနဲ့ကိုက်ညီမည့် 🧾စာရင်းခေါင်းစဉ်များသတ်မှတ်ပေးခြင်း စာရင်းဇယားများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထည့်သွင်းပေးကာ 📖စာရင်းရှင်းတမ်းများ၊အစီရင်ခံစာများ ပြင်ဆင်ပေးခြင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။… Continue reading Digital Accountant (Accounting Solutions)
Accounting Solutions for Micro, Small and Medium Enterprises @ MSME Books Powered by BCN
October 20, 2018 October 20, 2018 San Thida
Accounting, Digital Accountant
Accounting Solutions for Micro, Small and Medium Enterprises @ MSME Books
October 19, 2018 October 19, 2018 San Thida
Accounting Solutions for Micro, Small and Medium Enterprises @ MSME Books စတငျ အသုံးပွုနညျး လမျးညှနျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ စတငျအသုံးပွုရနျ ကှနျပွူတာ နှငျ့ internet connection သာလိုပါသညျ။ #BCN #MSME #Books *** Accounting Solutions for Micro, Small and Medium Enterprises @ MSME Books စတငျ အသုံးပွုနညျး လမျးညှနျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ စတငျအသုံးပွုရနျ ကှနျပွူတာ နှငျ့ internet connection သာလိုပါသညျ။ #BCN #MSME #Books
Business, Director Guide
Company Director Guide 2017
October 18, 2018 October 18, 2018 San Thida
SME အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများအဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက် / အသေးစားနှငျ့အလတျစားလုပျငနျးမြားအဓိပ်ပါယျသတျမှတျခကျြ
October 16, 2018 October 15, 2018 San Thida
အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများအဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက် *** အသေးစားနှငျ့အလတျစားလုပျငနျးမြားအဓိပ်ပါယျသတျမှတျခကျြ
October 15, 2018 San Thida
MSME Books သုံးပြီး ဘယ်လိုအရောင်းအဝယ်လုပ်ကြမလဲ။ *** MSME Books သုံးပွီး ဘယျလိုအရောငျးအဝယျလုပျကွမလဲ။ 09960897874 သို့မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။ *** 09960897874 သို့မေးမွနျးစုံစမျးနိုငျပါတယျ။